Seeraha ayaa u adkeysanaya isbeddelka cimilada markii jawigu hodan ku yahay CO2 | Cusbooneysiinta Cagaaran
Dhacdooyinka cimilada ee aadka u daranSida hirarka kuleylka iyo abaaraha, waxay wax ka beddeli karaan awoodda kala-goynta kaarboonka ee nidaamka deegaanka. Waad ku mahadsan tahay tijaabooyin dhammaystiran oo ku saabsan seeraha dhex-dhexaadka ah ee buuraha joogtada ah, cilmi-baarayaashu waxay muujiyeen markii ugu horreysay kobcinta CO2 ee jawiga waxay hagaajinaysaa soo kabashadal seeraha ka dib dhacdooyinkan ba'an. Intaa waxaa dheer, waxay hoos u dhigeysaa saameynta xun ee walaaca biyaha.
Inta udhaxeysa ilaa iyo dhamaadka qarniga, la socodka isbeddelka cimilada waxay horseedi doontaa kororka soo noqnoqoshada iyo darnaanta dhacdooyinka cimilada daran ee ay weheliso hirarka kuleylka iyo abaaraha. Kuwani xag-jirnimada cimilada ayaa lahaan lahaa saamaynta taban ee nidaamka deegaanka, gaar ahaan seeraha, oo u nugul abaarta isla markaana quudisa caanaha iyo lo'da. Ugu dambeyntiina, waxay sababi kartaa xaalufinta carrada, iyadoo yareyneysa waxa ku jira maadada dabiiciga ah ee hodanka ku ah kaarboon.
1 Kordhinta kaarboon laba ogsaydh
2 Abaar iyo kuleyl
Kordhinta kaarboon laba ogsaydh
Sideedaba, kororka kaarboon laba ogsaydhka jawiga ku jira ayaa xadidi kara khatarahaas cimilada. Xaqiiqdii, CO2 waa substrate loogu talagalay sawir-gacmeedka dhirta waxayna badanaa doorbidaa dulqaadka dhirta abaaraha iyo isku soo ururinta walxaha dabiiciga ah ee ciidda.
Ilaa maanta, lama oga inay kuwani yihiin iyo in kale saamaynta faa'iido leh ee CO2 way sii joogi karaan ama kuma sii jiri karaan haddii ay dhacdo cimilo daran. Markii ugu horreysay, jawaabta su'aashan waxaa la siiyaa mahadnaq tijaabo ah. Shaybaarka seeraha waxaa lagu soo rogay cimilo sida tii la filayay laga bilaabo sanadka 2050, ka diirran oo qalalan, iyo sidoo kale kororka isku-darka jawiga ee CO2 oo la isku daray, ama aan ahayn, kuleyl iyo abaar daran.
Abaar iyo kuleyl
Inta lagu jiro abaaraha iyo mowjadaha kuleylka, kobcinta Cimilada CO2 waxay hoos u dhigtaa saamaynta taban ee walaaca biyaha iyo kuleyl, ilaalinta howlaha jirka ee dhirta. Waxay kicisaa koritaanka xididdada, iyadoo u oggolaanaysa helitaanka biyo badan iyo nafaqooyinka ciidda, taas oo soo dedejinaysa koritaanka seeraha dhammaadka cimilada daran.
Dhamaan tijaabadan, kororka jawiga jawiga CO2 ayaa si buuxda loo magdhabaa saamaynta taban ee abaarta iyo kuleylka ku darsiga kaarboonka ee seeraha. Daraasadani waxay muujineysaa muhiimada ay leedahay in la tixgeliyo dejinta isdhexgalka ee daraasadda saameynta isbedelka cimilada.
Waxay muujineysaa in kororka jawiga CO2 uu kordhayo caabbinta arrinta dabiiciga ah ee ciidda, ee nidaamka deegaanka ee seeraha iyo lo'da oo ah wabiyada dhacdooyinka cimilada ee daran ee nooca kuleylka iyo abaarta, laakiin ma ogola in lagu soo gabagabeeyo saamaynta isugeynta ee cimilada noocan oo kale ah. Saamaynta isugeynta waa in lagu qiimeeyaa batari kale oo tijaabo ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Seeraha ayaa u adkeysanaya isbeddelka cimilada markii jawigu hodan ku yahay CO2
La ogaaday mid kale oo ka mid ah quwadaha sirta ah ee shinnida